Amazambane ababayo ane-chorizo ​​| Ukupheka Kwekhishi
Amazambane ama-Chorizo ​​amnandi
UMaria vazquez | 06/06/2021 10:00 | Izitishi Namasobho Ungadliwa
Ngokusebenzisa iqiniso lokuthi ezinsukwini zokugcina lina futhi selipholile enyakatho, ngiphakamisa iresiphi elula kakhulu esivame ukusebenzisa kuyo phakathi nezinyanga ezibandayo zonyaka: amazambane ababayo ane-chorizo. Njengabathandi bezitshulu, angikwazi ukuyeka ukuphakamisa lokhu, enye yezinto ezilula kakhulu esizilungiselela ekhaya.
Amazambane, i-chorizo ​​nezinye izinto ezimbalwa kulesi sitshalo. Lokho akusho ukuthi awukwazi ukufaka ezinye izithako kuyo ukuze iphelele. Abanye inkukhu eqoshiwe, i-tofu, noma i-tempeh ingangena kahle kulesi sibalo. Futhi njengokuhambisana, akukho okufana ne- isaladi eluhlaza.
Imizuzu engama-40, awudingi okwengeziwe ukulungisa lesi sitshalo. Iseluleko sami ukuthi uma usufikile kukho, yenza okwanele ukulungisa ukudla ngezinsuku ezimbili ezihlukile. Okungeke ukwazi ukukwenza ngalesi sitshalo ukusimisa futhi ukuthi njengoba sike sakhuluma kwesinye isikhathi amazambane awaphenduli kahle kule nqubo.
Izipuni eziyi-2-4 zamafutha omnqumo angaphezulu
1 anyanisi omkhulu omhlophe
Izingcezu ezi-12 ze-chorizo ​​ebabayo
½ isipuni esishisayo (noma esimnandi) se-paprika
1 ithisipuni yenyama ye-chorizo ​​pepper
Sika u-anyanisi nopelepele bese uwafake epanini ngezipuni ezimbalwa zamafutha imizuzu eyi-10.
Ngemuva engeza i-chorizo, amazambane ahlutshiwe achofoziwe kanye nenkathi. Saute imizuzu embalwa ngaphandle kokuyeka ukugovuza kuze kube yilapho i-chorizo ​​ikhipha ingxenye yamafutha ayo.
Okulandelayo, sengeza i-paprika, inyama ye-chorizo ​​pepper kanye simboza ngomhluzi wemifino.
Simboza i-casserole futhi Pheka yonke imizuzu engu-15-20 noma kuze kube yilapho amazambane esethenda.
Siwajabulele amazambane abilayo, ashisayo ane-chorizo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Izitishi Namasobho Ungadliwa » Amazambane ama-Chorizo ​​amnandi
Peas namazambane athosiwe nobhekeni